Ingxelo yabucala-Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
Ezilahlwayo imaski yokhuselo
Isigqumathelo sezonyango esilahlayo
Ukugaywa kwetalente kunye noqeqesho
Wena kunye negama leAKF leAKF Medical Technology Co, Ltd. (apha ngezantsi libizwa ngokuba yi "AKF"), unokucelwa ukuba ubonelele ngenkcukacha zakho. Le nkcukacha yobuqu inokwabiwa yi-AKF ngokungqinelana nomgaqo-nkqubo wabucala. Olu lwazi lomntu siqu lunokudibaniswa nolunye ulwazi kwaye lusetyenziswe ukuphucula iimveliso zethu, iinkqubo okanye iinkonzo, njl.
Nayi eminye imizekelo yeentlobo zeenkcukacha zobuqu ezinokuqokelelwa yi-AKF kunye nendlela esingayisebenzisa ngayo.
Ngokomthetho, siya kuqokelela, sisebenzise, ​​sigcine kwaye sichaze iinkcukacha zakho phantsi kweemeko ezithile. La magama alandelayo achaza indlela esiqokelela, sisebenzise, ​​silondoloze kwaye siveze ngayo iinkcukacha zakho.
Ingqokelela yolwazi lomntu siqu
1.1 、 Ezi nkcukacha zobuqu esizisebenzisayo, sizigcina, kwaye sizityhila ukubonelela ngeenkonzo zakho ngokwenza iiakhawunti, ukuchonga abasebenzisi, ukuphendula imibuzo kunye ne-imeyile.
Xa usenza iakhawunti yewebhusayithi ye-AKF, uthenga okanye ubhalise iimveliso zakho ze-AKF, ukhuphele isoftware ye-AKF kunye nohlaziyo lwayo, ubhalise kwivenkile ezithengisa nge-AKF okanye uthathe inxaxheba kolunye unxibelelwano nenkampani ye-AKF, siya kukucela ukuba unikezele ngolwazi lomntu siqu, kubandakanya kodwa Ayikhawulelwanga kwigama lakho, inombolo yefowuni, idilesi ye-imeyile, njl.
Sinokudibanisa ulwazi olungenisayo ngeakhawunti yakho kunye nezinye iinkonzo ze-AKF okanye ulwazi lomntu wesithathu ukubonelela ngamava angcono kunye nokuphucula umgangatho weenkonzo zethu.
Ukuba ugcwalisa iinkcukacha zakho kwamanye amaqonga avulekileyo, abanye abasebenzisi banokwaziswa ngolwazi lwakho.
1.2, iseva yethu (ebonelelwe ngumntu wesithathu) inokuqokelela ulwazi malunga nesixhobo sakho sonxibelelwano esiphathwayo, esifana kodwa singaphelelanga kwimodeli, i-ID yesixhobo, idilesi ye-intanethi, ixesha kunye nendawo yotyelelo lwakho, iipakethi zokuhambisa, umthumeli kunye nomamkeli wolwazi (kodwa hayi ulwazi ngokwalo), kunye nolunye ulwazi olurekhodiweyo olunempawu ezifanayo ukulungiselela ukuba ukhangele iwebhusayithi ye-AKF kwaye usebenzise iimveliso ze-AKF.
Siza kusebenzisa iicookies kunye nedatha yokuhamba njengokufana nezixhobo zokufumana ulwazi (ii-URLs) ukuqokelela ixesha kunye nomhla wokufikelela, ukukhangela kunye nokujonga ulwazi, njl.
2, Ulwazi ngawe usebenzisa
2.1 、 I-AKF iya kuyigcina ngokungqongqo imixholo echazwe kulo Mgaqo-nkqubo wabucala kwaye iya kukwazisa kwangethuba emva kokuba lo mgaqo-nkqubo wabucala uhlaziyiwe. Ulwazi lwakho lomntu siqu luya kusetyenziselwa kuphela injongo emiselwe ngexesha lokuqokelela. Ukuba kukho enye injongo, siya kucela imvume yakho kwangaphambili
2.2 information Ulwazi oluqokelelwe sithi luya kusetyenziselwa ukuphucula iinkonzo zethu, iimveliso kunye nemixholo efanelekileyo, kwaye isaziso siya kuthunyelwa kuwe okokuqala xa iimveliso, iinkqubo okanye iinkonzo ze-AKF zihlaziywa kwaye zikhutshwa. Unelungelo lokukhetha ukungasifumani eso saziso ngendlela echaziweyo.
Ukubhengezwa kolwazi lomntu buqu
3.1 Ngaphandle kokuchazwa okuncinci okuchazwe kulo mgaqo-nkqubo wabucala, siya kugcina ulwazi lwakho lomntu siqu kwaye asizukuchaza uluhlu lweenkcukacha zabathengi.
3.2 、 Uyasigunyazisa ukuba sixele iinkcukacha zakho kumntu wesithathu ngaphandle kwemvume yakho kwezi meko zilandelayo:
3.2.1 、 Ukuba sichaza olu lwazi ngeenjongo zokuchonga, ukunxibelelana okanye ukuzisa isimangalo ngokuchasene nasiphi na isenzo esinokubangela ukonakaliswa kumalungelo ethu okanye ipropathi, abasebenzisi bewebhusayithi okanye nabani na ongomnye (kubandakanya namalungelo omnye umntu kunye nepropathi).
3.2.2 、 Sibonelela ngenkcukacha zobuqu kumashishini ethu, amahlakani okanye amanye amashishini athembekileyo okanye abantu ukuba bacwangcise ulwazi lomntu egameni lomzi-mveliso wethu.
Sifuna la maqela angentla ukuba avume ukuqhubekeka olo lwazi ngokungqinelana nemigaqo yethu, lo mgaqo-nkqubo wabucala kunye nayo nayiphi na into eyimfihlo kunye nokhuseleko
3.2.3 、 Ngeenjongo zophando lwezomthetho.
3.2.4 discl Ukuxela okunjalo kuyafuneka kwisupina okanye ezinye iincwadi ezikhutshwe ngumthetho okanye zithunyelwe kuthi.
4.1 、 Kuthi, ukhuseleko lweenkcukacha zakho kubaluleke kakhulu. Siza kwenza iinzame ezifanelekileyo zorhwebo ukuqinisekisa ukhuseleko lweenkcukacha zakho kunye nokumilisela iinkqubo ezifanelekileyo zorhwebo ukuthintela ukufikelela okungagunyaziswanga, ukusebenzisa okanye ukuveza ulwazi lwakho lomntu siqu. Ngaphandle kwala manyathelo angentla, kufuneka wazi ukuba i-AKF ayinakuyiphepha ngokupheleleyo imingcipheko yokhuseleko enxulumene nolwazi lomntu
4.2 、 Kuya kufuneka usincede ukukhusela iinkcukacha zakho. Umzekelo, musa ukuveza igama lakho eliyimfihlo. Xa ugqibile ukubrawuza iwebhusayithi ye-AKF, nceda uphume kwiakhawunti yakho.
4.3 、 Xa usebenzisa ezinye iimveliso ze-AKF, iinkqubo okanye iinkonzo okanye uthumela kumaqonga onxibelelwano afana neeforamu ze-AKF, iinkcukacha zakho osinike zona ziya kufundwa okanye zisetyenziswe ngabanye abasebenzisi. Ukuba uthumela iinkcukacha zakho kwezi meko zingasentla, uya kuba noxanduva lweziphumo ezibi.
5, websites wesithathu kunye neenkonzo
Iimveliso ze-AKF, iinkqubo kunye neenkonzo zinokuqulatha amakhonkco okanye ulwazi malunga neemveliso zomntu wesithathu kunye neenkonzo. Iimveliso kunye neenkonzo ze-AKF zinokusebenzisa okanye zibonelele ngemveliso okanye iinkonzo ezivela kubantu besithathu.
Ulwazi olufunyenwe ngumntu wesithathu olunokuthi lube nemfihlo yakho luya kuba phantsi komgaqo-nkqubo wabucala Womntu wesithathu. Siyakucela ukuba ufunde umgaqo-nkqubo wabucala weqela lesithathu.
5.1 、 Xa ucofa ezinye iiwebhusayithi ezinxulumene nale webhusayithi, umkile kwiwebhusayithi yethu watyelela ezinye iiwebhusayithi. Ezinye iiwebhusayithi zinokuqokelela iinkcukacha zakho okanye idatha engaziwayo. Ke ngoko, asinakho ukulawula, ukujonga okanye ukuphendula kwezi webhusayithi kunye nemixholo yewebhusayithi. Asizukubenoxanduva lwayo nayiphi na ilahleko ebangelwe okanye enokubangelwa ziiwebhusayithi zomntu wesithathu ezinxulumana nale webhusayithi ziqokelela ulwazi lomntu okanye idatha engaziwayo ngaphandle kwemvume.
Lo mgaqo-nkqubo wabucala awusebenzi ekuqokeleleni idatha kwiiwebhusayithi zangaphandle emva kokucofa kwikhonkco.
Ukuqokelela nokusetyenziswa kweenkcukacha zabantu abakwishumi elivisayo.
6.1 、 Sicebisa abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala ukuba batyelele iwebhusayithi ye-AKF kwaye bathenge iimpahla ngemvume nolwalathiso lomgcini wabo osemthethweni.
6.2 、 ​​I-AKF ayizukusebenzisa iinkcukacha zomntu omncinci, okanye iveze iinkcukacha zayo nakuwuphi na umntu wesithathu. Umgcini unelungelo lokuyala i-AKF kunye namahlakani ayo ukuba aqhubeke nokuqokelela iinkcukacha zewadi, okanye acele i-AKF kunye nabo bayisebenzisayo ukuba bacime iinkcukacha zewadi.
Izilungiso kulo Mgaqo-nkqubo Wabucala.
Umgaqo-nkqubo wabucala uvumela uhlengahlengiso.
Ngaphandle kwemvume yakho, asizukuwenza buthathaka amalungelo akho phantsi kwalo mgaqo-nkqubo wabucala.
Utyalo E6, Ind. Tech Park, Xixiu Zone, Liangliu Road, Xixiu Dist., Anshun, Guizhou, China
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo